SENTAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA » Mashaariicda
Project Machine tolidda:
Project Aid Real- Machine Wax tolidda, iyo dawaarka Skills 2019
Tiro wanaagsan ee dumarka ku lug Village Banking Savings ayaa dareemay in dhibaateynayo by dembiyada weyn oo doonayay si aad u ogaato siyaabaha ku saabsan sida loo free ah laga fura xun sida aad u hesho.
Waxay ahayd aroortii hore ee March 2019 markii koox ka mid ah haweenka soo dhawaaday agaasimaha LWE ah Support Skills kale ah.
Maalin maalmaha ka mid Workshop Skills Discovery oo uu lacag ka SENTAfrica.
Money sida qaatay on cuntada, biyaha, cabitaannada fudud, qalabka xafiisyada iyo marti. Qiimaha total ahayd MK220, 000
Kooxaha Haweenka intooda ugu soo jeediyay xirfadaha horjoogsadeen in haddii makiinadaha harqaanka ahaayeen in la bixiyo. Warbixin loo diray lamaanahaaga LWE, SENTAfrica. haddana waxaa la tukaday oo ku saabsan iyo la wadaago. Oo ballan-qaaday ayaa la dhigay kuwa Rabbiga taabtay.
saddex bilood ka dib- June 2019; 6 mashiinada tolidda used la keenay goobta LWE ka kalluun Malawi. Waxaa la xusay in xaaladda laba ka mid ah lix mashiinada ma ahaa wanaagsan marka la barbar dhigo kale afar.
About 21 haween wadarta 42 kuwaas oo ka qeyb galay tababarka ee March 2019 wuxuu u yimid inuu khariidada jidka weeraryahanka- si uu ugala hadlo sida iyo markii si ay u bilaabaan barashada sida loo maareeyo mishiinnada. Messages rajo iyo guubaanin ayaa la wadaago oo naagihii ku ogaanaya in tirada mashiinada tolidda ka heli ma ahaa ku filan dumarkii oo dhan.
Project dawaarlaha Skills wuxuu u baahan doonaa 21 makiinadaha harqaanka. Laba dumar ah ay awoodaan in ay wadaagaan hal mashiinka inta lagu guda jiro tababarka noqon doonaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaan filaynaa haray 17 makiinadaha harqaanka (haddii iibsaday CUSUB) ku kici lahaa £ 1600.
Dhanka, Tababaraha xirfad leh ka kalluun Malawi ayaa la bixin doonaa by LWE si ay u bilaabaan siinta tababarka horjoogsadeen in ay 4 Dumarka hadda. Markaasaa afar kuwaas oo awoodi doonaan in ay noqotay maalintii uu xirfad u leeyahay kooxda oo dhan iyo xataa kordhiyo mashruuca in haween badan.
mashiinada More ayaa loo baahan yahay – ma caawin kartaa? All lacag ugu deeqay mashruuca doonaa iibsiga makiinadaha harqaanka, waayo kooxdan dumarka. Haddii aad rabto in ay beegsadaan aad deeq noo soo dirto email ah oo la tilmaamayo in deeq waa for 'iibsiga’ ama 'maraakiibta'. Waxaan rabnaa in aan ku siin dheeraad ah toddoba iyo mashiinada. Ka dib markii mishiinnada yimaadaan tababar xarunta LIVINGWAY ah waxaa la siin doonaa. Deeq la hayn doonaa in taariikhda horumarka mashruuca iyada oo loo marayo website this.
Siinta biyo nadiif ah 2017 Waxaa buuxiya – Waad ku mahadsan tahay in ay kuwaas ku deeqday oo dhan!
salaadda Garden – tani waxaa uu bilaabay in uu qaab qaado
view A saqafka ka cusub
Saqafka on goobta soo dhaweynta 2017 – Waxaa buuxiya – Waad ku mahadsan tahay in ay kuwaas ku deeqday oo dhan.
Dhisidda Hammer Mill a – Waxaa buuxiya – Waad ku mahadsan tahay in ay kuwaas ku deeqday oo dhan.
Keenida korontada goobta – 2019?
Waxaa la rajeynayay in mashruucan ayaa dhameystirtay lahaa in 2018 laakiin wali waa ay socdaan wadahadalo. Waxaan had iyo jeer la filayaa mashruucan si ay u bixiyaan tartan badan. Waxaa u baahan doontaa inaad diyaar u ah wada shaqeynta u dhexeysa Golaha Deegaanka, bixiyaha korontada, ESCOM iyo sidoo kale nafteena iyo isticmaalka kale ee mashruucan si ay u gaaraan dhamaystirka. Marka fursad laftiisa soo bandhigaysaa waxaan rabnaa in aan diyaar u noqon. Hadda, waa ku filan tahay in aan aad weydiiso si ay u tukadaan WAXBARASHADA LIVINGWAY. In noqday isku filan waxaan u baahan doonaa in ay il hallayn awoodda. Kooxda martida Our at martiyeed LIVINGWAY ah, isticmaala badan oo Galley LIVINGWAY ee Mill iyo kooxaha isticmaalaya xarunta shirka LIVINGWAY doono lacagta oo dhan ka haysta dhaxe korontada. Fadlan ka baryaynaa in tani laga yaabaa in ugu dhakhsaha badan iyo in dhammaan invo0lved ilaa goob kaabayaasha this lagama maarmaan ah waxay ku dhaqaaqi doontaa oo raac iyada xigmad iyo rabitaan midaysan koritaanka bulshada.
Tani waxay noqon doontaa qarashgareyso suuqa weyn WAXBARASHADA LIVINGWAY iyo calaamadee dhamaadka wajiga dhismaha kaabayaasha of our shaqo doonaa. Laga bilaabo halkan, waxaa laga filayaa in durdurrada dakhliga lagu maal doonaa shaqada horumarinta LIVINGWAY WAXBARASHADA ah.
Waxaan dhawri doonaa taageerayaasha oo dhan iyo kuwa xiiso shaqadayada ku wargeliyay inuu yahay mashruuca tani sii socoto.
Haddii aad rabto in aad ku deeqdo dhinaca dhamaystirka mashruucan isticmaasho badhanka hoose si aad ku deeqdo oo noo soo dira email dabagal ah si ay u muujiyaan halka aad rabto in hadiyadda si ay u tagaan.
Eeg bogga LIVINGWAY WAXBARASHADA ah, riix halkan.
Raadi wax ku saabsan WAXBARASHADA LIVINGWAY iyo abuurka macalimiinta: riix halkan
Raadi wax ku saabsan LIVINGWAY WAXBARASHADA iyo RealAid; riix halkan
Tag bogga WAXBARASHADA LIVINGWAY si aad u ogaato sida mashruuca uu horumar ama tag NEWS LATEST ah oo soo bixi dambayn WARSIDAHA.
Ha iloobin in aad nala soo xiriir oo noo sheeg waxay kula tahay.